Isirashiya Imperial Succession - Zonke Russian abaqondisi-mthetho ingaba apha! Oyena isemthethweni portal.
Isirashiya Imperial Succession
Le mithetho baba ayizange itshintshe
Kodwa kunokuba yonke imihla 'Umnu X' kunye enjalo elula rebuttal, masithi nathi cinga ngamnye yakhe iimpikiswano ngokulandelelanayoPrincess Adelaide Melita kokuba wayenolwazi edlulileyo umtshato. Wakhe wokuqala umyeni waba Grand Duke Ernest Aph ka-Hesse kwaye Rhine.
Inqaku le- kucacisiwe loo abantwana bebengayi dynasts
Oku kuqala umtshato bebe arranged yi-Ukumkanikazi Adelaide, owaye grandmother kunye bride kwaye groom kwaye owaye oxhalabileyo ukubona u-wakhe ncwadi grandchildren bamanyene matrimony. Njengoko wenziwe yatyhila ezininzi biographies, Ernest Aph akazange enyanisweni ezisuka zande ngakulo umtshato, kwaye union yaba intlekele. Msinyane Ukumkanikazi Adelaide wafa ngowe, umtshato wenziwa lokuphela kwexesha. Ukuba 'Umnu X' kuthetha argue ukuba, kuba succession ngeenjongo, i-ilingana no-dynastic umtshato kokufumana imperial ukuphunyezwa yi nonetheless ngokulawulwa a collateral isemthethweni attack ukusuka imithetho okanye imigaqo nezinye kunokuba succession imithetho yakhe isiphumezi-miyalelo azinako ugcinwa. Enjalo lonikezelo, ukuba ungeniswe, ingaba nikezela igosa ukulandelelana succession akaqinisekanga, oyilingayo kwaye ekugqibeleni meaningless, njalo defeating inqununu injongo ka-Hay mna kwi-promulgating i-succession imithetho: umzekelo, ukuqinisekisa ukuba uchazo lwe successor ukuba kwetrone waba cacisa ukususela succession imithetho ngokwabo. 'Umnu X' kanjalo ukuba waxoxa watsho u-Grand Duke Kirill akazange intloko dynasty ngenxa yokuba unina Nicholas II, abo bangakholwayo exile de, akazange aqonde kuye njengoko enjalo. I-flaw kule miyalelo kukuba succession waba omiselwe yayikukwenza yi-succession imithetho. I-Dowager Empress waba ibone lomtshato mkhulu owenza ingeniso respected, kodwa yakhe purported iimboniselo kwi succession baba irrelevant ukusuka isemthethweni incopho ka-imboniselo. Njengoko unyana wakhe umthetho wabhala incwadi yakhe memoirs, Dowager Empress ngowamashumi s a alaphukanga umfazi zabo ezimbini oonyana eziliqela grandchildren bebe brutally wambulala.
Ngexesha yakhe eseleyo reclusive eminyaka, yena wenza yonke into yayo amandla foster i-illusion ukuba unyana wakhe Nicholas II kwaye umzukulwana Alexei baba iingcaphephe? aphile kwi-Us.
Njengoko kwakuchaziwe phambi, succession imithetho kufuneka dynasts ukuba isivumelwano marriages kunye amaqabane ka-royal wokuzalwa ukuze uthumelo dynastic ubulungu abantwana babo. Inqaku le- states njengokulandelayo: 'umntu i-Imperial Usapho othe contracted umtshato kunye umntu a isimo unequal yakhe, oko kukuthi, hayi belonging ukuya royal okanye sovereign indlu, ayikwazi kudlula kwi-ukuba loo mntu okanye inzala ukuba babe mba ukusuka enjalo umtshato amalungelo ukuba belong ukuba amalungu Imperial Usapho. 'Ngomhla we- agasti, Nicholas II wongeza ezi zinto zilandelayo addendum ukuba Inqaku: 'Ngoku akukho grand duke okanye grand duchess babe isivumelwano a umtshato kunye umntu unequal zokuzalwa, oko kukuthi, hayi belonging ukuya royal okanye sovereign indlu.
'Kodwa oku emphatically akazange kuthetha ukuba abantwana a Prince ka-Us kwaye morganatic umfazi izakuba dynasts.
I-adherents ka nje morganatic ibango kanjalo conveniently Amanqaku kwaye, ezaye zange elungisiweyo. Inqaku ikhankanya ukuba 'bonke abantu imperial igazi abo bazelwe a umtshato phakathi umntu imperial igazi kwaye umntu ehambelana wokuzalwa apho umtshato wenziwa wagunyazisa yi-reigning emperor ingaba lunxulumano njengoko amalungu Imperial Indlu.
'Inqaku ichaza ngokucacileyo njengokulandelayo: 'Abantwana kuzalwa a umtshato phakathi ilungu Imperial Usapho kwaye umntu awangawo ehambelana zokuzalwa, oko kukuthi, hayi belonging ukuya royal okanye sovereign ndlu, kuba akukho ilungelo succession ukuba Kwetrone.
'Emva, phantse zonke dynasts asabela i-Revolution contracted morganatic marriages kwaye kokuba abantwana. Uphazamiseko ensued ngenxa yokuba ezi inzala bazalwe kwi-France, Usa, Emelika nakwamanye amazwe apho abantwana wathabatha nefani zooyise. Ngoko ke, ezi abantwana kokuba i-nefani ka-Romanoff ofakwe kwi-zabo izatifiketi zokuzalwa kwezo amazwe. I-isiphithiphithi waba odityaniswe xa-Grand Duke Kirill, njengentloko yesigqeba dynasty, accorded ezininzi (kodwa hayi zonke) ezi abantwana morganatic princely amaphawu kwaye morganatic surnames apho kwaquka ilizwi 'Romanowsky', denoting kinship (kunokuba ubulungu kwi) dynasty.
Isirashiya Inkampani ingqokelela yamanani: Liquidation neenkqubo Zomthetho Amaqumrhu wenziwe Ukwanda, kodwa hayi Ngenxa Bankruptcies - Ishishini Ulwazi Ishishini Association
Дене мландылан ӱчашен улыт кугу тӱня